Tsy Fananana Asa Soa
Federaly sivily mpiasa monina ao Pennsylvania sy miasa ho an’ny federaly fahafahana misafidy ao amin’ny faritany hafa tsy maintsy mifandraisa fa panjakana ny antontan-taratasy voalohany milaza. Federaly mpiasa izay napetraka eny vokatry ny governemanta federaly fanakatonana mety rakitra fangatahana UC soa.
Rehefa miditra ao amin’ny mba hametraka ny fampiharana, ianao dia hahazo bebe kokoa ny toromarika manokana ho federaly fanakatonana. Raha toa ianao tsy afaka ny rakitra an-tserasera, mba hiantso ny Pennsylvania UC Fanompoana Foibe amin’ny.
ny federaly mpampiasa
Ity vondrona ity dia heverina ho furloughed ary mety ho afaka noho ny tsy fisian’ny asa onitra.
ho an’ny asa tanterahana taorian’ny desambra, taona
Satria ireo olona ireo dia miara-miasa amin’ny fotoana feno, dia tsy azo heverina ho tsy an’asa na furloughed.
Ireo mpiasa dia tsy afaka ny tsy fananana asa onitra
Federaly mpiasa furloughed vokatry ny federaly fanakatonana dia tokony ho vonona mba hanome paystubs manomboka amin’ny volana jolay taona, mba hanamora ny famenoana ny fangatahana. Mandoa stubs nanaiky ny hampihatra ny karama mba ny filazana no ampiasaina ho toy ny affidavit mandra-karama dia nandray voamarina ny mpampiasa. Olona izay nahazo indray ny karama avy amin’ny mpampiasa, ny toy izany koa herinandro dia nahazo ny tsy fananan’asa onitra ny soa, dia ho foto-kevitra ny hamaly ny tsy fananana asa onitra ny soa. Rehefa hiverina hiasa, atsaharo ny famenoana ny herinandro(s) izay resuming ny asa ara-dalàna ora (na raha toa ianao ka tsy ho vola ny)
Ny lalàna mikasika ny fisoratana anarana ny fananana varotra ao India Trano Vaovao